Burundi oo ku hanjabtay in dhammaan ciidamadeeda ay kala bixi doonaan Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBurundi oo ku hanjabtay in dhammaan ciidamadeeda ay kala bixi doonaan Soomaaliya
Burundi oo ku hanjabtay in dhammaan ciidamadeeda ay kala bixi doonaan Soomaaliya
February 23, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Askar katirsan ciidamada Burundi ee AMISOm. [Sawir Hore]
Bujumbura-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Burundi ayaa ku taageeray dowladda hanjabaada ku saabsan in ay la bixi doonaan dhammmaan ciidamadooda katirsan Howlgalka Midowga Afrika ee AIMSOM ee Soomaaliya.
Midowga Afrika qorshahooda ku saabsan tartiib uga saarista ciidamada ajnabiga ah ee ku sugan Soomaaliya iyada oo Soomaaliya dhisanayso ciidankeeda kadib tobonaan sanno oo dagaal sokeeye ah, ayaa ka codsaday Burundi in ay la baxdo 1,000 askari oo katirsan 5,400 ciidamadeeda ku sugan Soomaaliya.
Guddoomiyaha aqalka Senate-ka Burundi ayaa sheegay in haddii 1,000 askari la saaro ay natiijo la’aan ku keeni doonto dagaalka lagula jiro Al-Shabaab, sidoo kalena ay khatar gelin doonto ciidamada kale ee Burundi ee ku sugan gudaha Soomaaliya.
Iyadoo habka howlgalka AMISOM uu dal walba siinayo in ay joogaan meelo gaar ah, ciidamada Burundi ayaa ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Burundi waa dalka labaad oo ku deeqay ciidamada AMISOM marka laga reebo Uganda, taasoo 6,200 ku deeqday.
Ciidamada AMISOM oo toban sanno ka badan Soomaaliya ka waday howlgal nabad ilaalin ah ayaa la filayaa in ay baxaan sanadka 2021 markaas oo ammaanka ay la wareegi doonaan ciidamada Soomaaliya.
Ilo-xog ogaal ah oo sheegay in Farmaajo uusan la kulmi doonin Muuse Biixi
Madaxweyne Deni oo kormeeray ciidamada difaaca Puntland oo ku sugan xerada 54-aad ee Garoowe
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo qaadi doona howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab
Muqdisho-(Puntland Mirror) Abaanduulaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ciidamadu ay qaadi doonaan howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya. “Howlaha ugu muhiimsan waxa weeye in la qaado [...]
Xilliga la fulinyo toogashada saddex nin oo lagu helay kufsi iyo dil gabar yar oo la shaaciyay
Garoowe-(Puntland Mirror) Saddex nin oo lagu helay in ay kufsadeen oo ay dileen gabar 12 sanno jir ah ayaa xukunkooda oo dil ah la fulin doonaa 11 bisha soo socota ee Febaraayo, sida maanta oo [...]
Puntland oo joojisay baabuurta rakaabka ee ka dhex shaqeeya Puntland iyo Somailand
Garoowe-(Puntland Mirror)Puntland ayaa joojisay baabuurta rakaabka ee ka dhex shaqeeya Puntland iyo Somailand, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Nugaal xalay. “Laga bilaabo caawa oo taariikhdu tahay 8,1, 2018, saacadu markii la gaaro lixda saac waxaa [...]